Ogaden News Agency (ONA) – Meygaaga Dhagaxbuur iyo Haarweyn oo dad lagu laayay iyo dad badan oo lagu xidhay magalada Dhuxun.
Meygaaga Dhagaxbuur iyo Haarweyn oo dad lagu laayay iyo dad badan oo lagu xidhay magalada Dhuxun.
Dilka, Kufsiga, Boobka iyo Xadhiga loo geysto shacabka Somalida Ogadeniya waa sharci ka jira dhulka Somalida Ogadeniya oo loo jideeyay Ciidmada Gumeysiga Ethiopia inay ku soo aar guttaan markasta oo uu guul-daro kala kulmo goobaha dagaalka. Woyanuhu waxa uu dib ugu gadoodaa dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan waxayna ku ciqaabaan hadba waxa ay doonaan.
Wararka aan kasoo arruurinay dhulka Somalida Ogadeniya ee Maalmihii ugu danbeeyay Ayaa waxa dhulka Somalida Ogadeniya ka dhacay dilal ka dhacay Maygaaga Dhagaxbuur iyo Haarweyn oo ka tirsan Godey. Waxakale oo dad badan lagu xidhay Magaalada Dhuxun iyo Goday.
Hadaba dilalkii ugu danbeeyay ee nasoo gaadhay waxay ka kala dhaceen
12/2/12 Maygaaga Dhagaxbuur waxa lagu dilay (Allaah Ha u naxariisto)
14/2/12 Haarwayn oo ka tirsan Goday waxalagu dilay (Allaah Ha u naxariisto)
Badri Cabdi Cali
19/2/12 Ceelka biyocade waxaa dhaawac loogu gaystay
Faarax Xuseen Gorod
Waxaa jira dad fara badan oo loo taxaabay xabsiga degmada Dhuxun 14/2/12 kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar dadkan oo laga soo uruuriyay deegaanka degamada ayaa kala ah
Faadumo Badri Cismaan
Faadumo Saxane Muxumed
Baari Maxamed Axmed
Xaliimo Cabdi Sheikh Cabdi
Cabdi raxmaan Sheikh Maxamed Aadan
Cabdi Maxamed Sagal
Dhuux Maxamed Sagal
Kaamil Cabdulaahi Siraad
16/2/12 waxaa isna magaalada Goday lagu xidhay
Sidii aad kala socoteen warbaahinta waxaa maalmihii ugu danbeeyay sii kordhayay xasuuqa ay kula kacayaan ciidamada hawaarintu dadka ogaadeenya ee aan waxba galabsan kuwaas oo ka dhacayay degaano ka tirsan gobolada jarar,shabeele, iyo meelo kale oo kamid ah Ogadeniya.